Soo dejisan Camtasia Studio 8.6.0.2079 – Vessoft
Soo dejisan Camtasia Studio
Camtasia Studio – software ah in lagu soo qabto video ka screen in tayo sare leh. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay qoraan video clips la video ciyaarayo, qabsadaan Goosimo qaar ka mid ah filimada ama abuuro video waxbarid ee qaabab kala duwan. Camtasia Studio ku jira qalab ka dhisay-in ay ku darto saamaynta, edit maqal ah ama video oo ku darto text inay lugahooda. Software ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay kaydisaa qayb ka mid ah video ah, beddelan Goosimo kala duwan oo ka saari dhawaaq xagga danbe ah. Camtasia Studio siisaa awood u leh inay qabsato maqal ah, panning iyo video ay qabtaan codsiyada 3D.
Waxay abuurtaa video in tayo sare leh
Itusi codka iyo video
Support for saamaynta kala duwan
Camtasia Studio Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Open Broadcaster Software 17.0.2 iyo 0.659b
العربية, English, Українська, Français... VirtualDub 1.10.4
العربية, English, Français, Español... Microsoft Office Excel Viewer 12.0.4518.1071 iyo 12.0.6320.5000